MDC Yoronga Kupinda Mumaruwa Kuti Ikweshana neZanu PF
Ndira 10, 2008
Bato reMDC rinoti riri kutarisirwa kuratidzira musi wa 23 Ndira richinyunyuta nedanho reZanu-PF rekutsika madziro ichiti sarudzo dziitwe muna Kurume.
MDC inoti sarudzo dzikaitwa muna Kurume zvinenge zvoreva kuti hurukuro dzekugadzirisa dambudziko rakatarisana nenyika, idzo dziri kutungamirwa nemutungamiri we South Africa, VaThabo Mbeki, dzinenge dzisisina basa sezvo dzisati dzapera.
Vakuru mubato iri vanoti kuratidzira uku kukaitwa, kuchatanga paHarvest House kwoperera paHarare Show Grounds.
MDC inotiwo inenge ichiratidzirawo zvakare kusafara kwayo nenyaya yekuoma kuri kuita hupenyu munyika. Nhaurirano pakati peMDC neZanu-PF dzambomira sezvo Zanu-PF yakati iri kuda nguva yekuti gurukota rezve mitemo, VaPatrick Chinamasa, mumwe wevari kuimiririra Zanu-PF muhurukuro idzi, vadzoke kubva kumusha kwavo.
Theresa Mugadza igweta uye achiongorora zvematongerwo enyika.
Mugadza audza mutori wenhau Blessing Zulu weStudio 7 kuti zvekuti sarudzo dziitwe muna Kurume hazvina nematuro ose sezvo pachine zvakawanda zvinoda kuitwa.
Zvichakadaro, MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, inoti iri kutanga hurongwa hwe New Zimbabwe Campaign hwekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzegore rino.
MDC inoti ichatanga hurongwa uhu nemusi weMugovera kuStodart,kuMbare. Bato iri rinotiwo richange richiita ma rally mazana matatu kumaruwa mwedzi uno usati wapera. MDC inotiwo haisi kufara nebasa rakaitwa ne Zimbabwe Electoral Commission pakutarwa kwemiganhu.
ZEC yakatara nzvimbo makumi matanhatu nenomwe dzichaitirwa sarudzo dzemumaguta, uye 143 constituencies, achange ari ekumaruwa. Vanoongorora nezve sarudzo vanoti matarirwo akaitwa miganhu iyi, anoratidza kuti ndiko kubiridzira kwakaitwa nehurumende, sarudzo pachadzo dzisati dzaitwa.
MDC inotiwo inoda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, zvibvumidzwe kuvhota musarudzo idzi.
Muzvare Thabitha Khumalo, mutevedzeri vemutauriri weMDC, vaudza mutori wenhau Patience Rusere weStudio 7 kuti havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende.